Waalidiintayda waxay ii heleen qof i guursada. Laakiin anigu ma DOONAYO in aan guursado. Maxaan sameeyaa? – Tips for refugees
Waalidiintayda waxay ii heleen qof i guursada. Laakiin anigu ma DOONAYO in aan guursado. Maxaan sameeyaa?
Midaasi waa xaalad aad u adag.
In dadka lagu qasbo in ay guursadaan
waa ka mamnuuc dalka Jarmal.
Waxaad haysataa doorashooyin badan:
Waxaad isku dayi kartaa in aad arintaasi kala hadashid qoyskaaga.
Qoyskaaga waxaa dhici karta in aysan dareemin in ay samaynayaan wax sharci daro ah.
Laakiin waxaa dhici karta in aysan adiga ku dhagaysan.
Waxaad ka tagi kartaa qoyskaaga kahor inta uusan dhicin guurka la qorshaystay.
Waxaad heli kartaa caawimaad.
Laakiin ka taxadir! Qofna hore ha ugu sheegin qorshahaaga ah in aad ka tagtid guriga.
Waxaad marwalba lasoo xiriiri kartaa Wüstenrose.
Lambarka teleefoonka waa 0 89 – 45 21 63 50.
Dadka meeshaasi ka shaqeeya waa kuwo garanaya xarumaha caawimaada ama taageerada laga helo dalka Jarmalka.
Waxay kaala hadli doonaan waxa aad samayn kartid.
Khasab kuguma ahan in aad ku sheegtid magacaaga tooska teleefoonka.
Qoraal ka yimid dhinaca Wüstenrose (IMMA e.V.)
Previous Previous post: Waxaan ahay gabar jirta-17-sanno. Waxaan jeclahay in aan guursado saaxiibkayga. Ma tahay midaasi mid laga oggolyahay dalka Jarmal?
Next Next post: Waxaan Facebook ku samaystay teleefoonkayga casriga ah. Sideen ku baran karaa dadka?